Acnes Anti-Bacteria And Skin Soothing Toner 90ml
Acnes Anti-Bacteria And Skin Soothing Toner 90ml..
Bella Watermelon 2-In-1 Toner Serum 75ml
Bella Watermelon 2-In-1 Toner Serum 75ml ချွေးပေါက်များနှင့် အမည်းစက်များကို ချက်ချင်းကြည့်ကောင်းစေပါသည်။တောက်ပ၊ ချောမွေ့စေပါတယ်။အဆီပြန်ခြင်းကို ချက်ခြင်းသက်သာစေပြီး တစ်နေ့တာလုံး တောက်ပြောင်နေစေပါသည်။ရေဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးလို့ အသားအရေကို တင်းရင်းစိုပြေစေပြီး စိုပြေစေပါတယ်။သန့်စင်ပြီးနောက် နေ့ရောညပါ အကောင်းဆုံးရလဒ်ကို ရရှိစေမှာပါ ။..
Cute Press Brightening Toner 100ml
Cute Press Brightening Toner 100ml..
Cute Press Ideal Toner + Moisture Milk
Cute Press Ideal Toner + Moisture Milk ..
Dabo Aloe Vear Calming Toner (30ml)
Dabo Aloe Vear Calming Toner (30ml)Dry Skin သမားတွေ/ sensitive skin တွေ Aloe Vera Juice လေးတွေကို အများကြီးထည့်ထားတာမို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အသားအရေလေးတွေ/ နေပူဒဏ်ကြောင့် နီမြန်းနေတဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် တကယ့်ကို အကျိုးထူးစေပါတယ်ရှင် ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အသားအရေကို အချိန်တိုခဏလေးအတွင်း ရေဓာတ်ဖြည့်ကာ စိုပြေနူးညံ့စေပါတယ်...မိတ်ကပ်တွေလိမ်း..
Dabo Aloe Vear Calming Toner (60ml)
Dabo Aloe Vear Calming Toner (60ml)Dry Skin သမားတွေ/ sensitive skin တွေ Aloe Vera Juice လေးတွေကို အများကြီးထည့်ထားတာမို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အသားအရေလေးတွေ/ နေပူဒဏ်ကြောင့် နီမြန်းနေတဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် တကယ့်ကို အကျိုးထူးစေပါတယ်ရှင် ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အသားအရေကို အချိန်တိုခဏလေးအတွင်း ရေဓာတ်ဖြည့်ကာ စိုပြေနူးညံ့စေပါတယ်...မိတ်ကပ်တွေလိမ်း..
Dabo Aloe Vera Calming Toner (160ml)
Dabo Aloe Vera Calming Toner (160ml)Dry Skin သမားတွေ/ sensitive skin တွေ Aloe Vera Juice လေးတွေကို အများကြီးထည့်ထားတာမို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အသားအရေလေးတွေ/ နေပူဒဏ်ကြောင့် နီမြန်းနေတဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် တကယ့်ကို အကျိုးထူးစေပါတယ်ရှင် ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အသားအရေကို အချိန်တိုခဏလေးအတွင်း ရေဓာတ်ဖြည့်ကာ စိုပြေနူးညံ့စေပါတယ်...မိတ်ကပ်တွေလိမ်..
Dabo Aqua Holding Toner (30ml)
Dabo Aqua Holding Toner (30ml)Aqua Holding Toner လေးကအဆီပြန်ခြင်းကင်းဝေးစေပြီး ချွေးပေါက်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အပြင် အဆီဖု အဆီခဲ နှင့် ဝက်ခြံရှိသူများအတွက်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ရေဓာတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်ပေးလို့ ကြည်လင်လန်းဆန်း စေပါတယ် Aqua Holding Toner က ချွေးပေါက်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး ရေဓာတ်ကိုလုံးဝဖြည့်ပေးတယ်.နေ့ရက်တိုင်း ကြည်လင်တဲ့အသားအရေ/လန်းဆန်းတက်..
Dabo Aqua Holding Toner 150ml
Dabo Aqua Holding Toner 150ml အသားအရေ အတွက်လိုအပ်သော ရေဓာတ်ကို အချိန်အတို အတွင်းလျင်မြန်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး အဆီပြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သဖြင့် တစ်နေ့တာလုံး လန်းဆန်းအေးမြစေပါသည်။(မည်သည့်အသားအရေမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။) - ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း အဆီပြန်ခြင်းများအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်- ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေပြီး အေးမြကြည်လင်စေမယ့် Aqua Holding Ton..
Dabo Collagen Lifting Toner 30ml
Dabo Collagen Lifting Toner 30mlအိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးCollagn ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေတင်းရင်းမှုကို အချိန်တိုအတွင်း ရရှိစေပါသည် ။ အရေး အကြောင်းရှိသူများနှင့် အသားအရေခြောက်သွေ့သူများ အသုံးပြု နိုင်ပါသည် ။..
Dabo Speed Whitening Tonar 60ml
Dabo Speed Whitening Tonar 60mlအသားအရေအတွက် လိုအပ်သော အဆီဓာတ်နှင့် ရေဓာတ် ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးကာ နေရောင်ခြည် ဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အသား အရေ ညိုမဲခြင်း ၊ မညီညာခြင်းနှင့် တင်းတိတ် ၊ မှည့်ခြောက်တို့ကို သက်သာစေပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပါသည် ။ (ဝက်ခြံရှိသူများ Sensitive Skin မသုံးသင့်ပါ။)နေရောင်ခြည်မှာ ပါဝင်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် အဓိကဖြစ်ပေ..
Dabo Speed Whitening Toner (30ml)
Dabo Speed Whitening Toner (30ml)အသားအရေအတွက် လိုအပ်သော အဆီဓာတ်နှင့် ရေဓာတ် ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးကာ နေရောင်ခြည် ဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အသား အရေ ညိုမဲခြင်း ၊ မညီညာခြင်းနှင့် တင်းတိတ် ၊ မှည့်ခြောက်တို့ကို သက်သာစေပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပါသည် ။ (ဝက်ခြံရှိသူများ Sensitive Skin မသုံးသင့်ပါ။)နေရောင်ခြည်မှာ ပါဝင်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် အဓိကဖြစ်..
Dabo Speed Whitening Toner Freckle Removal Moistful Collagen 150ml
Dabo Speed Whitening Toner Freckle Removal Moistful Collagen 150mlအသားအရေအတွက် လိုအပ်သော အဆီဓာတ်နှင့် ရေဓာတ် ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးကာ နေရောင်ခြည် ဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အသား အရေ ညိုမဲခြင်း ၊ မညီညာခြင်းနှင့် တင်းတိတ် ၊ မှည့်ခြောက်တို့ကို သက်သာစေပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပါသည် ။ (ဝက်ခြံရှိသူများ Sensitive Skin မသုံးသင့်ပါ။)နေရောင်ခြည်မှာ ပါဝင်တဲ့ခ..
Doaru White Toner Aloe Vera 150ml
Doaru White Toner Aloe Vera 150ml..
Doaru White Toner Sakura 150ml
Doaru White Toner Sakura 150ml..